¿Cómo comprar el HTC One M9 en España? | Androidsis
စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။
Alfonso က de Frutos | | HTC က, လဲ tutorial
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကြီးသည် HTC One M9 အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သောဈေးကွက်သစ်ကိုစျေးကွက်အများစုသို့ဖြန့်ချိတော့မည်ဖြစ်သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအပူလွန်ကဲမှုကြောင့်သံသယဖြစ်မှုများနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသည့်ကိရိယာတစ်ခုသည်၎င်းသည်ရရှိခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲလ် update သည်ပြallနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုရချင်တယ်လားသို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။ သင့်ကိုလမ်းပြပါတယ်
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ သင်က terminal ကိုဝယ်ယူရန်နည်းလမ်းများစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုစရာမလိုဘဲဒါမှမဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းအော်ပရေတာကတဆင့်တိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိလိုက်တာဖြစ်တယ်။ စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်ကိုသိရှိရန်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ လာမယ့်Aprilပြီလ 10 ကရောင်းချသွားလိမ့်မည်!
စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အလွယ်တကူမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း
အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်စတင်ရန် - မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော terminal တစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်အကြံမပြုခဲ့ပါ အော်ပရေတာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် HTC One M9 သည်အက်ပလီကေးရှင်းများအမှိုက်သရိုက်များနှင့်လာလိမ့်မည် သူတို့များသောအားဖြင့်ပါဝင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ထာဝရပaိညာဉ်စာချုပ်ကိုငါတို့လက်မှတ်ထိုးရမယ်။ သို့သော်လျှော့စျေးတစ်ခု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူရန်ကျောက်ချရပ်နားထားသည့် terminal ကိုပိုနှစ်သက်ပါက HTC One M9 ကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏အော်ပရေတာမည်သည့်စတိုးဆိုင်ကိုမဆိုသို့မဟုတ် PhoneHouse သို့သွားပါ။
သင်သိမထားဘူးဆိုရင် စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုမည်သို့အပြည့်အ ၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သနည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်: ရွေးချယ်စရာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အင်တာနက်အရောင်းရဆုံးဘုရင်မှာအမေဇုန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင် HTC One M9 ကို၎င်း၏စတိုးဆိုင်မှတဆင့်ရလိုလျှင် ၇၄၉ ယူရိုဖြင့်သင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ်။
စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်သင်ယင်းကိုကောက်ယူလိုပါကသင်သွားနိုင်သည် Corte Inglésဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစာရင်းသွင်းပါ အတွက် သင်၏အရောင်းရဆုံးသောနေရာတွင်ရွေးပါ ရရှိနိုင်တဲ့အခါ။ ဟုတ်ပါတယ်, အစုစုကိုပြင်ဆင်။ အမေဇုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယူရို ၁၀၀ တက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်မြန်လွန်းနေပါကလာမည့်Aprilပြီ ၁၀ ရက်အထိစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မတူညီသောဖြန့်ဖြူးသူများက၎င်းကိုရောင်းရန်ရှိလိမ့်မည် စျေးနှုန်းသည် ၇၀၀ မှ ၈၀၀ ကြားအထိရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။
Sorin atanasiu ဟုသူကပြောသည်
၂။ # HTCOneM2 အသစ်ကိုဝယ်ပါ
၃။ ၆ လအတွင်း M3 ကို ၀ ယ်ရန်ငွေစုထားပါ။
ResponderaSorin Atanasiu
Jiayu S4 သည် ၄.၇ လက်မ 4.7-bit terminal နှင့် USB Type-C ဖြစ်သည်